किवी पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण, प्रतिरोधी क्षमता बढाउन देखि रक्तचाप कम गर्न अत्यन्तै उपयोगी – Annapurna Daily
किवी पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण, प्रतिरोधी क्षमता बढाउन देखि रक्तचाप कम गर्न अत्यन्तै उपयोगी
On Oct 6, 2021 1,494
हरियो रङको सानो देखिने कीवी गुणको खजाना हो। भिटामिन बी, सी, एन्टिअक्सिडेन्ट, फस्फोरस, पोटासियम र क्याल्सियमले भरिपूर्ण कीवी पोषक तत्वको पावरहाउस हो। स्वास्थ्यका लागि यसको कमालको फाइदालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यविद्ले सबैलाई किवी खान सल्लाह दिन्छन्। आउनुहोस्, कीवी खाँदा शरीरले कस्तो प्रकारको फाइदा पाउँछ, यसबारे जानकारी लिऔं।
डीएनएको मर्मत गर्छ: तनाव, धुम्रपान, क्यान्सर, किमोथेरेपी, रेडिएशन, अत्यधिक औषधी र प्रदूषणको असर हाम्रो डीएनएमा पनि पर्छ । यसका कारण मृगौला, फोक्सो र दिमागसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका रोग लाग्छन् । किवीले डिएनएलाई सुधार्ने काम गर्छ । किवीको नियमित सेवनले पेटको क्यान्सरको खतरा कम हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाउँछ ।
इम्युनिटी बूस्टर: कीवीमा असाध्यै धेरै भिटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ । यसले प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो बनाउँछ र शरीरलाई रोगबाट टाढा राख्छ । कीवीलाई निकै राम्रो इम्युनिटी बूस्टर मानिन्छ । रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ: सन् २०१४ को एक अनुसन्धानका अनुसार एकदिनमा लगभग २–३ वटा किवी खाँदा रक्तचाप कम हुन्छ । लामो समयसम्म यसको नियमित सेवन गर्दा उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, हृदयघात वा मुटुसँग सम्बन्धित रोग टाढै रहन्छ ।
रगत जम्न दिँदैन: किवीले रगत जम्न पनि दिँदैन । हरेक दिन २–३ वटा किवी खाँदा रगत जम्न पाउँदैन । यो फलले रगतमा बोसोको मात्रालाई काम गर्न पनि मद्दत गर्छ । घाउ छिटो निको हुन मद्दत गर्छ: यदि तपाईंलाई घाउ लागेको छ वा तपाईंको शल्यक्रिया भएको छ भने किवी कुनै पनि हालमा खानुहोस् । यसले तपाईंलाई घाउ छिटो निको हुन मद्दत गर्छ । किवीमा पाइने प्राकृतिक तत्व र एन्टीब्याक्टेरियल एजेन्टले घाउलाई छिटो निको बनाउँछ ।
यो पनि,होचो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् मात्र यी ५ उपाय, हाम्रो उचाई निश्चित समयसम्म बढ्ने गर्दछ। उमेरमै उचाई बढेन भने वृद्ध वा वयस्क अवस्थामा उचाई बढाउँछु भनेर बढान सकिदैन्। त्यसैले तपाईको उमेर अनुसार उचाई बढेको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी केही उपाय अप्नाउनु उत्तम हुने गर्दछ। उमेर अनुसार पनि तपाईको उचाई आवश्यकता भन्दा कम छ वा बढेको छैन् भने चिन्ता नलिनुहोस् । आज हामी तपाईलाई उमेर अनुसार उचाई बढाउने केही उपयोगी टिप्सका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। यी उपाय तपाईले समयमै उपयोग गर्नुभयो भने तपाईको उचाई वाश्यकता अनुसार बढ्ने गर्दछ। उचाई बढाउन के-के कुरामा ध्यान दिने ?
४) घाम ताप्ने: घामको किरणबाट हामीलाई भिटामिन डी प्राप्त हुने गर्दछ। बिहानको समयमा, जतिबेला घाम रापिलो भएको हुँदैन त्यसबेला पैदल हिँड्ने गर्नुपर्छ। यसले हड्डी बलियो हुन्छ र लम्बाई पनि बढ्छ। भिटामिन डीयुक्त दुध, माछा, अन्डा, पनिर पनि सेवन गर्नुपर्छ। ५) घरेलु उपाय: उचाई बढाउनका लागि अश्वगन्धाले प्रभावकारी काम गर्छ। नियमित रुपमा दुई चम्चा अश्वगन्धा चुर्ण एक गिलास दुधमा मिलाएर पिउनुपर्छ। यसो गर्दा पनि तपाईको उचाईमा वृद्धि हुने गर्दछ।